Ivive APK Download for Android [Inguqulo Yamuva] - Luso Gamer
I-Ivive APK Landa i-Android [I-New Version]
Kwangathi 17, 2021 Kwangathi 14, 2021 by Shweta Tripathi
Noma kunjalo izithombe zaletha ushintsho ezimpilweni zabantu. Kusuka ekusindiseni umlando wangemuva kuya kumamaki wememori ukukhumbula futhi ujabule esikhathini esedlule. Kepha i-Ivive APK ithatha lowo mdlalo yaba ezingeni elisha lonke.
Izithombe nezithombe zinezincazelo ezahlukahlukene zabantu abahlukile. Ngisho kuwo wonke umuntu, ahlinzeka ngombono ohlukile isikhathi ngasinye lapho ebukwa. Kwesinye isikhathi zisisiza ukuba sigijimise izinkumbulo zethu, kwesinye isikhathi ziwukuphela komthombo wolwazi kithi, zixoxa izindaba, zabelane nezikhathi, futhi ziphathe okwedlule nathi.
Ngakho-ke, kule nkathi yobuhlakani be-Artificial kanye neqiniso elingathandeki kuvumela ukuguqula lezi zindawo zakudala nengcebo ibe yinto eyehla. Uma ufuna, vele uthole i-Ivive App yefoni yakho ye-Android noma ithebhulethi mahhala kuleli khasi.
Yini i-Ivive APK?
I-Ivive iyithuluzi elinikeza ukubukeka okusha nokuqagela kwezithombe esizibukayo. Ikwenza lokhu ngokuzenzakalelayo ngokusebenzisa okungokoqobo okungathandwa ngumphumela. Lokhu kudala ubukhulu abasha obumnandi kumizwa nokubonwa kwesithombe, ngokungeza izithombe ezinhle kakhulu.
Ngakho-ke kungani unganiki impilo izithombe zethu. Noma nini lapho sibabheka mabayeke badlulise ngaphezu kwalokho esingakucabanga ngokusebenzisa ubuchopho bethu. Lapho sisebenzisa imicabango yethu, masibe qotho, inemikhawulo. Akubona bonke thina abangamaPicassos noma uVan Goghs.
Lokho kushiwo. Manje-ke uma singeke sibe nomcabango onjengombhali wama-Avatars noma abaculi abadumile. Singakwazi ukusebenzisa ubuchwepheshe ukusenzela lokho.
Usayizi 31.13 MB
Igama lephakheji com.ivive
Iyadingeka i-Android 4.3 nangaphezulu
Futhi uma ujwayelene namaqiniso augmented ungahle wazi ukuthi ube nomthelela ongakanani endleleni yethu yokubona nokubuka umhlaba.
I-Ivive App inawo wonke lawo mandla adingekayo ukuthatha ubuqambi busezingeni elisezingeni elingaphezu komthamo womuntu. Uma ungaqinisekile ukuthi sikhuluma ngani. Hlola uhlelo lokusebenza ngokwakho ngokusebenzisa ngalo kudivayisi yakho ye-Android.
Uhlangabezana nezwe lokuqhubeka kwezithombe nezithombe ngendlela entsha. Yibone ihamba futhi ulingisa impilo ngezindlela ezintsha, ezesabekayo, nezingalindelekile.
Uma ususenzile izithombe ezinhle kakhulu ngesithombe sakho osithandayo, sekuyisikhathi sokuhlanganyela nabangane bakho noma kwabezindaba zokuxhumana ukuze ukhexe abalandeli bakho.
Ungalanda Kanjani i-Ivive APK?
Ukuze uthole lolu hlelo lokusebenza olwesabekayo ku-smartphone yakho vele ulandele izinyathelo njengoba kungaphansi.
Okokuqala, iya kusixhumanisi sokulanda ngezansi bese uthinta Ibha Lokulanda le-APK
Iya kwisitoreji sedivayisi lapho inqubo yokulanda isiqedile bese uthola ifayela.
Thepha kuwo ukuze uqale ukufakwa
Nika amandla inketho yamadivayisi angaziwa kusuka kuzilungiselelo zefoni
Thepha izikhathi ezimbalwa ngaphezulu futhi lapho ukhona.
Manje usungathola i-Avive APK esibukweni segajethi bese uthinta ukuze uyivule. Manje ungangeza izithombe bese ubona umlingo. Into eyodwa okufanele iphawulwe ukuthi ngeke isebenze nazo zonke izithombe. Ukusebenza kukhawulelwe kuzithombe ukuthi uhlelo lokusebenza luzokutshela ngenkomba yesithonjana.
I-Ivive APK yindlela enhle yokubheka izithombe ngendlela yenoveli. Ngosizo lwangempela olungathandeki, ikunikeza okuhlangenwe nakho okusha okumangazayo. Ukuze ujabulele lolu hlelo lokusebenza oluyingqayizivele ngezinceku ezigcwele vele uthole ifayela ngokuthepha kusixhumanisi sokulanda se-Android yakho.
Izigaba Apps, Ezokuzijabulisa Amathegi IVive APK, Uhlelo lokusebenza lwe-Ivive Imeyili kwemikhumbi
I-Movidy Apk Landa i-Android [App Yezokuzijabulisa]
I-technical King VM APK Ukulanda i-Android [PUBG Virtual]